मिसले नै चिक्न सिकाउनुभयो - Nepali Sex Tube
कक्षा आठको पढाइ सुरु हुन लागेको थियो। १२ वर्षको उमेरमा मेरो गेडा वरिपरि चिलाउन थालेको थियो। केही हप्ताको त्यो कठोर चिलाइ पछि त्यहाँ कैले रौहरु देखिन थाल्यो। अनि लाडोले चिप्लो पानी चलाउन थाले देखि नै निकाल्न थालेको थियो। एक दिन उठ्ने बित्तिकै घरमा एउटी केटीको स्वर सुने। नित्य लाडो चलाउने काम छोडेर म खुरुरु भर्याङ ओर्लेर तल पुगे। आश्चर्य, यिनी जो थिइन, साह्रै राम्री थिइन। सायद नयाँ अनुहार भएर पनि त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। उनी अलिक मोटी थिइन। उनको पुठो र छातीको उठाइ आकर्षक थियो। पुष्टिएको त्यो शरिर मादक त छदै थियो। उनी उस्तै राम्री र भलादमी देखिन्थिन।
मैले कुरा सुन्न थाले। उनी माथिको कोठमा बस्न आएकी रहेछिन। जुन मेरो कोठाको साइडमा थियो। स्कुलकी मिस। ६ देखि ८ कक्षालाई पढाउने रहेछिन्। अर्थात यी राम्री मिसलाई घर र स्कुल दुवै ठाउँमा दिन दिनै देख्न पाइने भयो। अहिलेसम्म केवल कल्पनाको सहारा लिएर पुराना दृश्यको सहारामा प्यास मेटाउनु पर्ने थियो, अब त यस्तो चान्स कति आउँछ कति।
अबका रातहरु झनै रंगिन हुन थाले। म उषा मिसलाई सोच्दै हल्लाउँथे। पढाइमा टाठो थिए। तर मिसको विषयमा नजानेको जस्तो गरेर प्रश्न सोध्न उहाँको कोठामा जान्थे। कोठा भित्र छिर्ना साथ क्रिम र पाउडरको बास्नाले मन्त्र मुग्ध पार्थ्यो। एकाएक थकान दुर हुन्थ्यो।
मिस धेरैजसो खाटमा उत्तानो सुतेर कुनै किताब पढिरहेको हुनु हुन्थ्यो। म छिरेपछि सिरानी तिर बस्नु हुन्थ्यो, अनि म उहाँ तिर फर्केर खाटको अर्को छेउमा बस्थे। अनि मलाई सिकाउन थाल्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो पहिले पढिसकेको हुन्थे, मिसले सिकाउँदा म उहाँको गुलाबी ओठ नियाल्थे। म मिसको कोठामा आउने लतमा परेको थिए।
मिसको उमेर त्यस्तै २४-२५ वर्ष थियो होला। मलाई मन पर्ने उमेर। टिसर्ट भित्रको स्तनको पोका ठूलो थियो। वस् मलाई त्यसैले आकर्षित गर्थ्यो। कोठाको एक छेउमा टाँगेको डोरीमा मिसका लुगाहरु झुन्डिएका हुन्थे। कुर्ता, सुरुवाल, सारी, टिसर्ट अनि भित्री वस्त्रहरु, पेन्टी, ब्रा अनि फूलबुट्टेदार चिप्ला समिजहरु। ती भित्र लुगाहरुले छुट्टै तरङ्ग ल्याउँथ्यो। म मिसले लगाएको लुगा नियाल्थे। है, यी लुगा भित्र पनि त्यस्तै ब्रा अनि पेन्टी लगाउनु भएको होला। कस्तो होला त्यो ब्रा भित्रको दृश्य। कस्तो होला त्यो पेन्टी भित्रको अंग। म पहिलो पटक साँप्रा र स्तन बाहेकका अरु स्त्री अंगको कल्पना गर्दै थिए।
यो नयाँ अंगको सम्भावनाले मलाई निर्जलाको साँप्रा भित्र कस्तो होला भन्ने कल्पनाले सताउन थाल्यो। तर अहँ कसै गरेपनि त्यो दृश्य कस्तो होला मैले सोच्न सकिन। त्यसमा लाडो रगड्दा कस्तो होला। यी कल्पना गर्दै म निदाउँथे।
मलाई त्यो गुप्ताङ्ले प्रश्न माथी प्रश्न उब्जाउँदै गयो। मिस घर जानु भएको थियो। उहाँको कोठामा पक्कै किताबहरु होलान, स्वास्थ्य किताबमा त पक्का छ होला, ८ कक्षाको किताबमा छैन, भने ९ र १० कोमा त पक्का होला नि। आखिर मिसले स्वास्थ्य पनि पढाउँनुहुन्छ, माथिल्लो कक्षाको किताब त हुनु पर्ने हो। म मिसको कोठामा छिरेर किताब खोज्न थाले।
म निस्किनै लागेको थिए। मेरो नजर मिसको लुगाहरुमा पर्यो। पहिलो पटक मैले मिसको पेन्टी समाते। अनि ओल्टाइ पल्टाइ हेरे। पेन्टीको भित्र पट्टी केही टाटाहरु लागेको थियो। सायद धुन राखेको पेन्टी हुनुपर्छ। मलाई त्यो सुघ्न मन लाग्यो। आहा, ठ्याक्कै मिसको बासना, तर निकै कडा थियो। मेरो लाडो जुरमुराएर आयो। त्यसपछि मिसको समिज र ब्रा पनि सुँघे। सबैभन्दा बढी बासना पेन्टी बाटै आउँदै थियो। मलाई मिसको शरिरसंग नजिकिन मन लाग्यो। मिसको खाटमा पल्टेर पेन्टी सुघ्न थाले। केही बेरमै लाडोले चिप्लो पानी फाल्यो। मैले त्यही पेन्टीले त्यो पुछे, केही ब्रामा लाग्यो। मिस आउँदासम्म सुकिसक्छ, त्यो पनि धुन राखेको लुगा थाहा नहोला। म मिसको कोठाबाट सन्तुष्टिको सास फेरेर निस्किए।
मिससंगको पहिलो रात
मिसले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। एक त घरबेटीको छोरा, अर्को म फुच्चे अनि क्युट थिए। बाहिर हेर्दा सोझो अनि राम्रो, मलाई जसले पनि काखमा लिन खोज्थ्यो। आखिर १२ वर्षको केटो न थिए।
मिससंग म निकै झ्याम्मी सकेको थिए। मिस पनि मसंग गफ गर्नुहुन्थ्यो। काउकुती लगाएर जिस्काउनु हुन्थ्यो। उहाँको हातहरुले मलाई छुदा विशेष मजा आउँथ्यो तर ती कुराहरु ख्याल नगरेको जसरी म मिसको काखमा लडिबुडी गर्थे। उहाँको छातीमा घरी मेरो अनुहार ठोक्किन्थ्यो तर घरी हातले छोइन्थ्यो। मैले जानीजानि गर्ने यी हर्कतहरु मिसको नजरमा पर्थेन। त्यो बेलुकी म मिससंगै थिए। मिसले किनेर ल्याउनु भएको मिठा मिठा खानेकुराहरुको मज्जा लिदै थिए। बेलुका सुत्ने बेलासम्म पनि म मिसको खाटमा सुतेर बसिराखेको थिए। मिस खाटको छेउमा सुतेर किताब पढिरहनु भएको थियो।
‘यतै सुत अब।’, मिसले किताब खाटको साइडको टेबलमा राख्दै भन्नुभयो। मैले खाटको माथी रहेको बत्तिको स्वीच अफ गरेर छिटो छिटो सिरक भित्र छिरीहाले। मलाइ यो अवसर गुमाउनु थिएन।
रातको अध्यारोमा मिसले टिसर्ट खोल्नु भयो। बाहिरबाट आएको हल्का प्रकाशमा मैले मिसका दुइ ठूला स्तनको आकार देखे। मिसले ब्रा पनि फुकाल्नु भयो। स्तन छचल्किए। अध्यारोमा केवल त्यसको आकार देखे। मैले सोचेको भन्दा पनि ठूला रहेछन्। मिसले ब्रा फुकालेपछि टिसर्ट मात्र लगाउनु भयो। अनि खाटको छेउतिर सुतेर मलाई अंगालो हाल्नु भयो। मिसको यो हर्कतले मेरो मुटुको ढुकढुकी बढ्यो। मेरो मनमा जे छ त्यो मिसको मनमा छैन, त्यो मलाई थाहा छ, तर मिसको त्यो सुगन्धित शरिरको बासनामा त्यो तातोपन पनि अनुभव गर्दा भने म पनि मिसको छाती तिर चेपिन पुगे। मिसका ती स्तनहरु मेरो छातीमा टाँसिएका थिए। मिसको हातले मलाई बेरेको थियो। मिसले मात्र यो केयर गर्नको लागि गर्नु भएको भएनि मेरो लागि त अर्कै कुरा थियो। त्यो तातो शरिरको स्पर्शमा मेरो मनमा कुनै कल्पना चल्न सकेनन्। मेरो ठन्किसकेको लाडो मिसको शरिरमा रगड्ने मन भएर आयो, तर मिसले के भन्नुहोला, मलाई आँट आएन। म जति नै मिससंग टाँसिएको भएपनि मैले मेरो लाडोको क्षेत्र भने मिसको स्पर्शबाट टाढै राखिरहेको थिए। निकै बेरसम्म म यसरी नै मिसको बाहुमा उत्तेजित भएर टाँसिरहे।
सायद मिस निदाउदै हुनुहुन्थ्यो।
जब मिस निदाउँनु भयो। तब म मिसको छाती नजिकै नाक लगेर त्यसको बासना सुघ्न थाले। बिस्तारै ठन्किएको लाडो मिसको साँप्रा नजिक पुर्याएर त्यसमै टाँसेर राखे। केही बेरसम्म त्यसरी बस्दा नै मेरो लाडो पानी पानी भइसकेछ। कट्टु भित्र हात हालेर हल्लाउन थाले। मिसको अंगालोमा बेरिएर मिसको बासना सूघ्दै मिसकै ओछ्यानममा मैले त्यो रात सन्तुष्टी पाए।
भोलीपल्ट अध्यारो भएपनि म मिसको कोठामा पुगे। मिस त्यसरी नै किताब पढिरहनु भएको थियो । उहाँको घुँडासम्मको सेतो तिघ्रा मन लोभ्याउने खालको थियो। मलाई देखेपछि उहाँले खाटको कुना तिर आउन इशारा गर्नु भयो। म मिसको तिघ्रा समात्दै त्यहाँ पुगेर मिसको साइडमा लम्पसार परे।
‘बच्चा कसरी हुन्छ मलाई जान्न मन लागेको छ’ मैले सोधेँ,
‘तिमीलाई सेक्स भनको थाहा छ ?’, मिसले मुस्काउँदै भन्नुभयो।
‘थाहा छैन, के हो सेक्स भन्या ?’, मैले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नु पर्यो। यो शब्द मैले सुनेको थिइन।
‘यौन सम्पर्क भनेको सुनेको छौ?’, मिसलाई उत्तर दिन गाह्रो पर्यो जस्तो छ। निकैबेरको मौनता पछि सोध्नुभयो।
‘यौन भनेको त थाहा छ, तर यौन सम्पर्क भनेको थाहा छैन मिस।’
‘ओके, यौन भनेको के हो त?’ मिसको अर्को प्रश्न। यसको उत्तर त ठ्याक्कै थाहा थिएन।
‘यही लिङ्ग योनी सम्बन्धि कुरा होला।’, मिस मेरो उत्तर सुनेर हाँस्नु भयो।
‘हो यही लिङ्ग योनी भित्र छिर्यो भने त्यसलाई भन्छ यौन सम्पर्क।’
‘एँ, अनि छिर्छ र त्यत्रो लिङ्ग त्यहाँ भित्र?’
मिस मुस्काउनु भयो, ‘तिमीले देखेको छौ र?’
‘के लिङ्ग ?’
‘होइन लाटा, त्यो त तिमीसंगै छ, योनी देखेको छौ?’
‘छैन, कस्तो हुन्छ पनि थाहा छैन।’
‘लिङ्ग कस्तो हुन्छ त थाहा छ नि ?’
‘थाहा छ । मैले देखेको छु।’
‘कसको देखेको छौ?’
‘मेरो ठूलो छ।’
‘हो र ? लौ, कत्रो ठूलो छ र तिम्रो?’, मिसले मेरो पेटमा काउकुती लगाउँदै सोध्नुभयो।
‘डब्बल, तेब्बर नै ठूलो छ होला।’, मेरो उत्तरले मिस छक्क पर्नु भयो। सायद पत्याउनु भएन।
‘लौ, नापेर पनि हेर्यौ?’
‘अँ, ठूलो हुँदा ७.५ सेन्टीमिटर लामो हुन्छ।’
‘अचम्म, तिमी कति वर्षको भयौ?’
‘१२ लागे यो वर्ष।’
‘९ सेन्टीमिटर त वयस्क लिङ्गको आकार हुन्छ। तिम्रो कसरी हुन्छ यत्रो ठूलो, खै त।’, मिसले हातले मेरो कट्टु बाहिर हात लैजानु भयो। वस् म यही त कुर्दै थिए। मेरो ठन्किरहेको लाडोमा मिसको हात पर्यो। ज्यान नै सिरिङ्ग भयो। मिस पनि तरङ्गित हुनुभयो। लिङ्गको आकारले मिस छक्क पर्नु भयो। मिसले मेरो लिङ्ग समातेर मापन गर्नु भयो। मैले सत्य बोलेको मात्र सावित भएन, मिसको कौतुहलता अझ बढ्यो।
‘के भएर भयो यस्तो, बाहिर निकाल त म हेर्छु।’
‘निकाल्ने र मिस।’, मलाई पहिलो पटक लाज पनि लाग्यो।
‘लाज लाग्यो? मिसले गाला चिमोट्दै कानमा आएर भन्नु भयो, ‘म कसैलाई पनि भन्दिन नि त।’
मैले कट्टुबाट लाडो बाहिर निकाले। छाला फर्किसकेको लाडोको टुप्पो रातो भएको थियो। मिसले हातले मेरो लिङ्ग समात्नु भयो। फर्किएको छाला देख्नु भयो। वरिपरि आएका कैला रौं अनि झुन्डिएका स-सना गेडाहरुको बिचमा अजङ्गको लिङ्ग देख्दा मिसको अनुहारमा आश्चर्यको भाव झल्कियो।
‘कट्टु लगाउ।’, मैले भित्र हुले।
‘मिस किन हेर्न खोज्नु भ’को?’
‘तिम्रो उमेरमा यति ठूलो हुन नहुने हो। यो त ठूलो मान्छेको जत्रो आकार भइसकेको छ। एउटा कुरा भन त? के तिमी हस्तमैथुन गर्छौ ?’
मैले मिसको मुखमा हेरे। गर्छु भनम कि गर्दिन भनम। यो विषयमा धेरै सोध्नु भयो भने त मैले के कुरा भन्ने के कुरा लुकाउने ?
‘हस्तमैथुन भनेको थाहा छ ?’, मैले ट्वाल्ल परेको देखेर सोध्नु भयो।
‘अँ थाह छ, बेला बेला गर्छु।’, मैले भने, मनको बोझ नै हल्का भएजस्तो भयो।
‘त्यो गर्दा कस्तो पानी आउँछ ?’ सोचेभन्दा फरक प्रश्नको गर्नुभयो। पानी पनि फरक फरक हुन्छ र, ममा पनि कौतुहलता जन्मियो।
‘पानी जस्तै, तर चिप्लो आउँछ।’
‘अँ त्यो त आउँछ, त्यो बाहेक अरु खालको पानी आउँछ? सेतो पानी आउँछ?’ मिसले फेरी सोध्नुभयो। मिसको अनुहारमा अझै कौतुहलता बाँकी थियो।
‘अहँ, पानी जस्तै, रंग नभएको पानी मात्र आउँछ। त्यो पनि ३ महिना भयो आउन सुरु भएको।’
‘त्यही त बेलै भएको छैन, तिम्रो लिङ्गको आकार देखेर म अचम्ममा पो परे। कति गर्छौ हस्तमैथून भन त।’
अब भन्दा त फरक के नै पर्ला र। भन्दिन्छु।
‘दिनमा कम्तिमा १ पटक।’
‘वाफरे, दिनदिनै गर्छौ, कति वर्ष भयो?’
‘खै, टन्नै भयो, ६-७ वर्ष।’, मैले ३-४ वर्ष लुकाएर भने।
‘त्यति सानै उमेरबाट, त्यसैले पो रहेछ ठूलो आकार भएको, कसले सिकाको तिमीलाई त्यति सानै उमेरमा यसबारे।’
‘आफै जानेको, चलाउँदा मज्जा हुन्थ्यो, अनि दिनदिनै गर्न थाले।’
‘तिमी त देख्दा भन्दा नि चम्मु रहेछौ। यस्तो यस्तो कुरा जानेको रहेछौ।’
‘मिस अर्को कुरा सोधम ?’
‘सोध, जे सोधेनी हुन्छ। सोधम भनेर सोधिरहनु पर्दैन।’
‘मिस, मलाई तपाइको पुति देखाउनु न।’
‘हेर्छौ? मिसले गाला निमोठ्दै सोध्नुभयो। ‘कसैलाई पनि नभन है त।’
म पनि मिसको कानमा गएर साउती गरे, ‘कसैलाई पनि भन्दिन मिस।’
‘उ तल जाउ।’, मिसले खुट्टा फट्याएर भन्नु भयो।
उत्तानो सुतिरहनु भएको मिसको खुट्टा तिर गएर उहाँको मुख तिर फर्किए।
‘स्कर् भित्र छिर।’, मिसको यो स्टेप बाइ स्टेप निर्देशनले मलाइ उत्तेजित बनाउन थाल्यो।
म स्कर्ट उचालेर भित्र टाउको घुसारे।
‘के देख्यौ?’, मिसले स्कर्ट बाहिरबाट मेरो टाउको समात्दै सोध्नुभयो।
‘कस्तो रंगको?’, मिसलाइ पनि उत्तेजना चढेजस्तो लाग्यो।
‘अँ, तल तान।’ मैले बिस्तारै पेन्टी तल ताने मिसले पुठो थोरै उचालिदिनु भयो। पेन्टी सरर तल निकाले।
मिलाएर छाँटेको जस्तो रौंको बिचमा पुक्क उठेको पुति देख्दा मेरो शरिरमा करेन्ट दगुर्यो। मैले कसै गरी पनि यसको कल्पना गर्न सक्थिन।
‘अँ, मैले सोचेजस्तो हुँदो रहेनछ।’
‘पुग्यो हेर्न ?’
‘छैन, छुम ?’
‘हुन्छ। जे गर्नु छ गर।’ मिसको परमिसन पाएपछि त के चाहियो र ?
मैले रौँमा हात दगुराए। अनि पुतिको डिलमा स्पर्श गरे। मिसले लामो स्वास फेर्नु भयो।
पुतिको डिल च्यातेर हेर, साच्चै दुइवटा प्वाल हुने रहेछ। माथी सानो प्वाल थियो। अनि तल अलिक लाम्चो खालको च्यातिएको जस्तो अंग।
‘अनि यो तलको प्वालमा लाडो छिर्छ त ?’, मैले औलाले चलाउँदै सोधे।
‘के लाग्छ तिमीलाई ट्राइ गरेर हेर्छौ?’
‘अँ, ट्राइ गरम ?’
‘गर, गर्न आउँछ भने।’
मैले हत्तपत्त ठन्किरहेको लाडो निकाले पुतिमा घुसार्न खोजे। पोजिसन मिलाउनु पर्ने रहेछ।
‘आउ ममाथी चढ पहिले। अनि म मिलाइ दिन्छु।’
म मिस माथी घोप्टिए। मिसको स्तन मेरो मुख नेर पर्यो, अनि मिसले मेरो ठन्किएको लाडो समातेर पुति नजिक पुर्याइ, मुखमा राखिदिनु भयो।
‘ल बिस्तारे तल झर।’ मिसले अझै मेरो लाडो समातिरहेनु भएको थियो।
मैले चाक तल झारे, लाडो पुतिको डिलमा छोइदाँ त्यो तातोपनाको महसुस भयो।
सुरुमा कहाँ छिर्यो छिर्यो जस्तो भयो। एकैछिनमा पुतिको डिलको अनुभव भयो, अनि टुप्पो छिर्यो। वरिपरि छालाले अठ्याएको जस्तो लाग्यो। अलिक भित्र छिर्यो। पुति चिप्लो थियो। अलिक पेलेरै बल गरे, पुति भित्र लाडो छिर्दै गयो। सबै छिर्यो।
‘कसरी छिर्दो रहेछ देख्यौ?’
‘अँ, यो त आफैले चलाए जस्तै रहेछ, तर मज्जा हुने रहेछ।’
‘अब माथी तल गरेर छिराउने निकाल्ने गर।’
मैले चाक माथी निकाले, पुतिबाट लाडो लुत्तै बाहिर निस्कियो, चिप्लिएर साँप्राको बिचमा छिर्न खोज्यो। मिसले फेरी समातेर डिलमा राखिदिनु भयो। मैले फेरी भित्र छिराए, मिसले आँखा चिम्म गर्नु भएको थियो। अनुहार रातो भएको थियो। मैले त्यही मौकामा टिसर्ट माथी उचालेर भित्र हेरे।
‘पख म टिसर्ट फुकालिदिन्छ, तिमी भित्र बाहिर गरिराख।’ मिसले टिसर्ट फुकालेर ब्रा पनि मिल्काउनु भयो। म एकाएक त्यो बढेमानको स्तनमा मुख गाड्न पुगे। कति वर्ष देखिको कल्पना वास्तविकतामा परिणत भएको थियो। मलाई सारा कल्पनाको संसारलाइ अब साच्चै उतार्नु पर्ने थियो। मैले दुवै हातले मिसको स्तनको आकार मापन गरे, मुसारे, अचेटे। अनि मुन्टा चुस्न थाले। ब्रा भित्र थुनिएर होला दुइ स्तनको बिचको खाल्डो अनि स्तनको तल चेपिएको भागमा पसिना आएको थियो। वस् मलाई त्यो चाट्नु थियो। मुख भित्र कति अट्छ मैलै त्यति नै स्तन मुख भित्र हुालेर चुस्न थाले। अनि बिस्तारै लय मिलाउँदै मिसको पुति भित्र लाडो भित्र बाहिर गर्न थाले। मिसले बेला बेला लामो स्वास फेरेर ‘आ…आ…..’ को आवाज निकाल्नु हुन्थ्यो। त्यो आवाजले मेरो उत्तेजना अझ बढ्थ्यो। अनि म अझै रफ्तारमा मिस माथी मच्चिन्थे। सधै हातले चलाएको लाडोले आज वास्तविक स्वाद चाख्न पाएको थियो। चिप्लो तातो नरम चिजमा लुत लुत छिर्दा निकै आनन्द आउँथ्यो। आज अरु बेला भन्दा पनि कडा भएको थियो। त्यसैले पनि मज्जा हुदै थियो। केही बेरमै मिसको पुति भित्र पानी नै पानी भयो। मिसले मलाई जोडले समातेर आफ्नो छातीमा मेरो मुख गाड्नु भयो। म अझै जोडसंग मिसको शरिरमाथी हल्लिरहे। निकै बेरसम्म यो क्रिडा चल्दा मिसको पुति वरिपरिको रौं पनि पुरै भिजिसकेको थियो। मेरो गेडासम्म च्याप च्याप थियो। झन्डै ३० मिनेटसम्म मिसको पुति भित्र लाडो छिराउने, निकाल्ने गरेपछि अन्तत: म थाकिसकेको थिए, चरम उत्कर्षमा पुगेपछि म मिसको शरिरमाथी शिथिल भएर लम्पसार परे। मिसले मेरो टाउको मुसार्न थाल्नु भयो।
झन्डै १५ मिनेट म त्यसरी नै मिसको नाङ्गो शरिरमाथी सुतिरहे।
‘तिमीलाई थाहा छ यौन सम्पर्कलाइ असभ्य भाषामा के भन्छ?’, मिसले प्रश्न गर्नु भयो।
‘थाहा छैन, के भन्छ ?’
‘चिक्नु भन्छ, आज तिमीले मलाइ बढो मजाले चिक्यौ।’
‘तपाइले पहिले पनि गर्नु भएको थियो, चिक्नु भएको थियो?’, मलाई यो नयाँ शब्दको झंकार बढो मन पर्यो।
‘अँ, मेरो व्वाइफ्रेन्डसंग, तर ५ मिनेट मै गलिसक्थ्यो। सायद यो पहिलो पटक होला, म आफै पनि स्खलित भएको।’
मलाइ फेरी एक पटक चिक्न मन थियो। ठन्किएको लाडो झनै कडा कडा भयो।
मैले मिसलाई सोध्दै नसोधी मिसको पुतिमा लाडो छिराएर फेरी चिक्न थाले। यो पटक त मिस ओठ टोकेर आँखआ चिम्म गरेर सिरानी समात्न थाल्नु भयो। सायद मिसले आफ्नो लिमिट पार गरिसक्नु भएको थियो। यो पटक फेरी २० मिनेट मैले मिसको रातो पुति चिके। मेरो लाडोको सन्काइ शान्त भयो। अब त कत्ति पनि शक्ति बाँकी थिइन। हामी दुवै थकित थियौ। मिसले मलाई नाङ्गै अंगालोमा च्यापेर सुत्नु भयो। त्यो बिहानी उठ्दा म मिसको नग्न शरिरको साडइमा थिए। मिसको दुध मेरो मुख नेर जोतिएको थियो।